अब भुलेर पनि नफाल्नुहोस मौसमको बोक्रा, यस्ता छन अचूक फाईदाहरु! - Jagaran Post
Home/स्वास्थ्य/अब भुलेर पनि नफाल्नुहोस मौसमको बोक्रा, यस्ता छन अचूक फाईदाहरु!
अब भुलेर पनि नफाल्नुहोस मौसमको बोक्रा, यस्ता छन अचूक फाईदाहरु!
२०७६ पुष २५, शुक्रबार १५:१६ गते
अक्सर हामीले मौसम त खान्छौं तर बोक्रा भने मिल्क्याऊने गर्दछौं। हामीमध्ये धेरैलाई मौसम तथा सुन्तलाको बोक्राको फाईदा र उपयोगिताको बारेमा सायद थाहा नै छैन होला। त्यसैले हामीले कहिल्ल्यै पनि मौसमका बोक्राको बारेमा चासो लिने पनि गरेका छैनौं।
पूर्वी अफ्रीकी मुलुक तान्जानियामा हरेक सडकका गल्ली, चोक, चौतारो, पार्क आदि जहिंतहिं स-सानो ठेला लिएर उक्त ठेलामा मौसमको बिक्री गरिने गरिन्छ। मौसममा प्रशस्त सिट्रस लिमोनोइड्स पाइन्छ । जसले फोक्सो, छाला, स्तन, पेट र मलाशयमा हुने क्यान्सरको जोखिम कम गर्छ। मौसममा पाइने फाइबरको मात्राले पाचन प्रणाली बलियो बनाउन मद्दत गर्छ । यसलाई दैनिक खाँदा कब्जियतबाट समेत छुटकारा पाउन सकिन्छ।
भिटामिन सी ले भरिपूर्ण मौसम मौसमको जुस नियमित पिऊनाले भोक बढाऊनुको साथै रगत पनि शुद्ध हुने गर्दछ। पुरुषहरुमा शुक्राणुको संख्या तथा गुणस्तरमा अत्याधिक रुपमा वृद्धि गर्ने पनि गर्दछ।
शरिरमा तौल घटाऊन देखि लिएर ब्लड प्रेसरलाई नियन्त्रणमा राखिराख्न मौसमले धेरै नै सहयोग गर्नेगर्दछ भने छालाको चमकतालाई पनि जोगाईराख्ने काम गर्दछ। नियमित मौसमको जुस सेवनले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई वृद्धि गर्नुका साथै ब्लड सुगरका बिमारीलाई पनि निकै लाभदायक मानिन्छ।
कब्जियत, स्कर्वी, क्यान्सर, अर्थराईटिसजस्ता धेरै रोगहरुमा लाभदायक मानिने मौसमले मुटुरोग पोटासियमको कमीका कारण लाग्ने रोगको लागि पनि फाईदा गर्ने गर्दछ। मौसममा पाइने पोटासियम र इलेक्ट्रोलाइट्स मिनरलले मुटुको गतिविधिलाई सुचारु राख्न मद्दत गर्छ र मुटु स्वस्थ रहन्छ।
मौसमका बोक्राका फाईदै फाईदा !
मौसमका बोक्रामा पाईने एण्टि-अक्सिडेन्ट नामक तत्वले छाला र कपाललाई चमकदार बनाऊने काम गर्दछ। मौसमका बोक्रालाई राम्रोसंग घाममा सुकाएर धुलो बनाईसकेपछि यसमा मह मिसाएर लेपन बनाई अनुहार तथा छालामा लगाऊनाले छाला तथा अनुहारमा चमकपन आऊने गर्दछ। बजारमा महंगो दाममा बिक्री हुने मौसमको बोक्राको धुलोमा अलिकति दहि मिसाएर छालामा लगाऊनाले छालामा जाम भएर बसेका सूक्ष्म छिद्रहरु खुलाऊन मदत गर्दछ। अनुहारको चाया, पोतो डन्डीफोर हटाऊनको लागि मौसमका बोक्राको पाऊडरलाई अलिकति गुलाव जल मिसाएर लेपन बनाई लगाऊने गरिन्छ। साथै कपालको चमकताको लागि पनि मौसमको बोक्राको धुलोलाई प्रयोग गर्ने गरिन्छ।
कोरोना भाइरसबिरुद्धको खोप पहिलोपटक मान्छेमा परिक्षण गरिंदै
२०७६ चैत्र ३, सोमबार १०:२४ गते
गर्भपतन गराऊँदा पेटको बच्चाले पनि पिडा महसुस गर्ने बैज्ञानिकको दाबी
२०७६ माघ ६, सोमबार १०:४१ गते
२०७७ असार ८, सोमबार १४:४४ गते
२०७७ जेष्ठ २८, बुधबार ०८:४३ गते
कोरोनाबिरुद्धको सहयोग सामाग्री लिएर चीनीयाँ विमान काठमाण्डौ आऊंदै
२०७६ चैत्र ११, मंगलवार ०२:४० गते